Zlatan Ibrahimovic oo RIKOODH aan innaba caadi ahayn ka heysta kooxda Europe League lagu beegay Man United ee Saint-Etienne – Gool FM
Zlatan Ibrahimovic oo RIKOODH aan innaba caadi ahayn ka heysta kooxda Europe League lagu beegay Man United ee Saint-Etienne
Byare December 12, 2016
(Europe) 12 Dis 2016. Man United ayaa lagu aadiyay kooxda Saint-Etienne isku aadka wareega 32 ee Europe League.
Marka laga soo tago in kulanka ay isku wajihi doonaan labo Pogba maadaama xiddiga Man United walaalkii ka wayn ee Florentin Pogba uu u safto kooxda reer France ayaa misane la warinayaa in Ibrahimovic uu RIKOODHKA ugu fiican ka heysto kooxdan.
Ibra ayaa goolashii ugu badnaa ebid uu hal naadi ka dhaliyo ka dhaliyay kooxda Saint-Etienne ee wareega 32-aad ee Europe League la ciyaari doonta Red Devils oo wuxuu shabaqeeda soo taabtay 14-jeer 13-jeer uu ka hor yimid.
35-jikan ka soo wada ciyaaray horyaalada Holland, midka Talyaaniga, Spain, Faransiiska iyo Ingiriiska uu iminka ka ciyaaro ayaa rikoodhka ugu fiican ka heysta kooxdan waxaana ugu soo xiga Palermo ee ka dhisan Serie A uu ka dhaliyay 12-gool, Nice iyo Marseille ee ka wada dhisan Ligue 1-ka Faransiiska ayuu min 11-gool ka dhaliyay.
AS ROMA VS AC MILAN: Shaxda & safafka ay caawa kusoo geli karaan!
Marcelo Brozovic oo qandaraaskiisa lagu xirey shuruud qaali ah!